स्वास्थ्य – ताजा समाचार
कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै सरकारले सीमा बन्द गर्नेदेखि लिएर ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको छ । १५ दिनदेखि देश ‘लकडाउन’मा छ । सामाजिक दुरी कायम गर्दै जनता आ–आफ्नै घरमा छन् । यही सन्दर्भमा सरकारका काम कारबाहीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर यसअघि २० महिनासम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, […]
यलु जोशी । २६ चैत, काठमाडौं : कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमका कारण जारी लकडाउन (बन्दाबन्दी) का बेला घरमा बसेर खाने रमाइलो गर्ने त गरिरहनु भए कै होला तर तपाईंले शारीरिक सक्रियतालाई कतिको ख्याल गर्नु भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ, चिकित्सक तथा खेलाडीले पनि घर भित्रै बसेर शरीरलाई फूर्तिलो बनाउन केही शारीरिक अभ्यास गर्नु […]
डा कल्याण सुवेदी कुनै पनि virus ले (Coronavirus ले पनि) आँफै नयाँ virus बनाउन सक्दैन। त्यसको लागि virus ले पशुपन्छी, मानिस वा अन्य जीवको कोषको भर पर्नु पर्छ। तर शरीरको कोषले जे पायो त्यहि आँफु भित्र छिर्न दिंदैन। त्यहि भएर Virus ले मानबको कोषलाई झुक्याउन आफ्नो शरीरको बाहिरी भागमा रहेको protein तत्व प्रयोग गर्छ जसले […]
काठमाडाैं । डाक्टर सुधांशु केसीले कलेजोमा समस्या तथा कलेजोका बिरामीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै सल्लाह दिन थालेका छन् । उनले फोनबाहेक अन्य माध्यमबाट आएका जिज्ञासाको उचित समाधान दिने गरेका बताएका छन् । समाजिक सञ्जाल टुइटरमार्फत उनले एक टुइट गर्दै उनले कलेजोका बिरामीका लागि आफुले सबै जिज्ञासा सकेसम्म समाधान गरेको बताएका छन् । देश लकडाउनको […]
नेपालभित्र पहिलो पटक कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरेको छ। कैलालीमा यसअघि दुबईबाट फर्किएका एक जना पुरूषमा कोरोना भाइरस देखिएको थियो। शनिबार उनकी आफन्त एक जना ३४ वर्षीया महिलामा पनि कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। योसँगै पहिलो पटक नेपालभित्रै एकबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि […]
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले अझै तीन हप्ता कडा लक–डाउन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेख्दै उनले आगामी तीन हप्ता विश्वको लागि निकै पीडादायी हुने समेत बताएका छन् । यस्तो छ उनले दिएका सुझाव : आगामी ३ हप्ता विश्वको लागि निकै पीडादायी हुनेछ । संक्रमित तथा मृतकको संख्या अकल्पनीय रुपमा बढ्नेछ […]
ताजा समाचार । ५ चैत, काठमाडौं : राष्ट्रसंघीय बालकोष युनिसेफले आधाभन्दा धेरै नेपालीलाई साबुन पानीले हात धुने सुविधा नभएको जनाएको छ । युनिसेफका अनुसार संसारभरका हरेक ५ जनामध्ये ३ जनासँग मात्र हात धुने सुविधा छ । ‘नेपालमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा धेरैको पहुँचमा साबुनपानीले हात धुने सुविधा छैन’ युनिसेफले भनेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) […]
इटाली कसरी कोरोनाको चपेटामा पर्योः एक इटालीयन नागरिकको अनुभव
अहिले कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को प्रकोप सबैभन्दा बढी इटालीमा फैलिदै छ, देश पूरै ‘लक डाउन’ अवस्थामा छ। त्यहाका एक नागरिकले विश्वका अरु देशका नागरिक र सरकारलाई इटालीको अनुभवबाट सिकेर दिएको सन्देश। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, अहिले कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) फैलिएको कारणले पूरै इटाली क्वारान्टाइनमा छ। त्यो भनेको बाहिर निस्कने अती आवश्यक काम नभए सम्म […]
३६ जनामा डेंगु भेटियो, लक्षण के हुन्छ, कसरी बच्ने ?
२ चैत, काठमाडौं । मौसम परिवर्तनसँगै नेपालमा डेंगु रोग पनि देखा पर्न थालेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार सन् २०२० जनवरीदेखि मार्च १३ सम्ममा ३६ जना डेंगुका विरामी भेटिएका छन् । प्रदेश नम्बर १ को झापा, मोरङ र सुनसरीमा गरेर ६ जनामा डेंगु देखिएको छ भने प्रदेश नम्बर ३ का विभिन्न जिल्लामा […]